भेरोनिका रोथ: किताबहरु वर्तमान साहित्य
वेरोनिका रोथ: किताबहरु
एनकर्नी आर्कोया | 26/09/2021 20:25 | अद्यावधिक गरियो 26/09/2021 20:34 | लेखकहरू
युवा र डिस्टोपियन किताबहरु मन पराउनेहरु को लागी, जसमा उनीहरु समाज, वर्ग, आदि को भविष्य प्रस्तुत गर्दछन्। पक्का नाम वेरोनिका रोथ र उनको किताबहरु यो उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ।
तर वेरोनिका रोथ को हुन्? कस्ता किताबहरु लेख्नुभएको छ? यदि तपाइँ उसलाई चिन्नुहुन्न, वा यसको विपरित, यदि तपाइँ उसको सबैभन्दा प्रसिद्ध किताबहरु जान्नुहुन्छ, तब हामी तपाइँले सबै लेखेको र उनको जीवनी को बारे मा बताउनेछौं।
1 वेरोनिका रोथ को हुन्?
2 वेरोनिका रोथ किताबहरु
2.1 भिन्न त्रयी
2.2 Divergent संग सम्बन्धित छोटो कथाहरु
2.3 Duology मृत्यु अंक
2.4 अन्त्य र अन्य शुरुआत: भविष्य बाट कथाहरु
2.5 Duology हामी छानिएका थियौं
वेरोनिका रोथ को हुन्?
स्रोत: फरक ब्लग
वेरोनिका रोथ एक त्रयी को लागी प्रसिद्धि मा उठे। विशेष गरी, फरक। यस्तो सफलता थियो कि एक छोटो समय मा तिनीहरूले यसलाई एक फिल्म मा अनुकूलित गरे, र त्यो 1988 मा जन्मेका यस अमेरिकी लेखक को क्यारियर लाई बढायो। Rydz (जो पनि पोलिश वंश छ)।
Su जीवन न्यूयोर्क मा पहिलो वर्ष बित्यो, तर जब उनका बुबाआमाको सम्बन्ध विच्छेद भयो, र उनकी आमाले दोस्रो बिहे गरे, उनी ब्यालिton्टनको इलिनोइसमा बस्थे।
उनी सानै थिइन् उनी लेख्न र पढ्न मन पराउँथिन्। उनको परिवार उनको लागि एक ठूलो समर्थन थियो पछि, उनी लेख्न को लागी एक प्रतिभा थियो भनेर थाहा पाएर, उनीहरु लाई उनको प्रोत्साहन को लागी सुधार गर्न को लागी निर्देशित गर्न को लागी र यो मा प्रशिक्षित गर्न को लागी। त्यसोभए उनी उत्तर पश्चिमी विश्वविद्यालय मा भर्ना भए जहाँ उनले "रचनात्मक लेखन" को अध्ययन गरे।
उनी त्यो क्यारियर मा एक डिग्री छ र पनि उनको पहिलो किताब लेख्न को लागी ट्रिगर थियो। सुरुमा यो केवल एक नराम्रो मस्यौदा थियो, एक ठाउँ जहाँ उनले आफ्नो क्यारियर बाट सिकेका कुरा कब्जा गर्दा कलेज को जागिर बाट आराम को लागी एक सुरक्षा को रूप मा यो प्रयोग गरीरहेको थियो। त्यो किताबको नाम? फरक। वास्तवमा, वेरोनिका रोथले दावी गरे कि उनी पहिलो पटक त्यो कथा संग "सम्पर्क" मा आएकी थिईन् मिनेसोटा को यात्रा मा, कलेज को लागी।
जाहिर छ, उनले यसलाई प्रकाशित गरे, र यस्तो सफलता थियो कि २०११ मा यो १५ देशहरुमा मान्यता प्राप्त भयो। तेसैले, उनले घोषणा गरे कि यो एक त्रयी थियो। साथै 2011 लेखिका को लागी एक महान वर्ष को रूप मा उनी फोटोग्राफर नेल्सन Fitzh संग विवाह भएको थियो।
एक बर्ष पछि उनले एक फिल्म निर्माण कम्पनी पाए, शिखर सम्मेलन मनोरन्जन त्यो किताब नोटिस हुनेछ, र फिल्म अनुकूलन को लागी प्रतिलिपि अधिकार बेच्नुहोस्। उही वर्ष, पहिले नै 2012 मा, उनले दोस्रो भाग, विद्रोह जारी गरे।
2013 मा यो Leal को पालो थियो। र पक्कै तपाइँ जान्नुहुन्छ कि सबै किताबहरु को अनुकूलन बनाइएको थियो, काफी सफलता काटेर।
पुरस्कार को लागी, त्यहाँ दुई धेरै सान्दर्भिक छन्। एक हात मा, २०११ मा, जब Goodreads समुदाय यो एक मनपर्ने किताब को रूप मा सम्मानित गरियो। एक बर्ष पछि, Goodreads मा पनि, यो सर्वश्रेष्ठ युवा वयस्क विज्ञान फिक्शन र काल्पनिक कथा को लागी पुरस्कार जित्यो।
Divergent त्रयी को परे, Verónica Roth ले अन्य उपन्यासहरु लाई प्रकाशित गरेको छ, यी कम सफलता संग किनभने उनीहरु को बारे मा सुनेको छैन। जे होस्, हामी तल उनीहरुमा टिप्पणी दिनेछौं।
वेरोनिका रोथ किताबहरु
स्रोत: किताबहरुको शहर
Verónica Roth बाट, किताबहरु कि साँच्चै विजयी र एक क्रान्ति को मतलब छ, त्यहाँ धेरै छैनन्। वास्तव मा, केवल पहिलो तीन कि उनले बाहिर निकाले, भिन्न, विद्रोही र वफादार, ती सबै फरक फरक त्रयी बाट।
जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि लेखकले प्रकाशन बन्द गरेको छ, धेरै टाढा। उनको साहित्यिक जीवन २०११ मा शुरू भयो र अझै २०२१ मा चलिरहेको छ। तेसैले, हामी तपाइँलाई उनको किताबहरु को बारे मा बताउँछौं।
हामी भेरोनिका रोथ द्वारा पहिलो किताबहरु संग शुरू, र यी Divergente (2011), Insurgente (2012) र Leal (2013) हुन्। उनीहरु सबैले बीट्रिस, एक केटी को कथा सुनाए, जो उनको समाज को एक गुट को लागी कौशल हुनुको सट्टा, ती सबै थिए। र त्यो एक खतरा थियो, यहाँ सम्म कि यदि उनीहरु उनको रहस्य पत्ता लगाए भने मृत्युदण्डको सजाय हुन जान्छ। उनको अर्को, हामी Cuatro, नायक को साथी छ।
त्रयी dystopian किताबहरु संग एक हिट थियो। वास्तव मा, यो हंगर गेम्स को रूप मा एकै समय को आसपास बाहिर आयो, जसले यसको सफलता लाई अझ ठूलो बनायो।
Divergent संग सम्बन्धित छोटो कथाहरु
Divergent त्रयी को समापन पछि, Verónica Roth प्रशंसकहरुलाई केहि "उपहार" दिन जारी राखे, र यसको नतीजा छोटो कथाहरु कि उनले उत्पादन गरे। उदाहरणका लागि, चार: Divergent को इतिहास को एक संग्रह, जसमा उनले पाँच लघुकथाहरु संकलन गरे कि चार को जीवन को भागहरु, वा मूल कहानी को केहि अध्यायहरु को आफ्नो दृष्टिकोण को बयान। निस्सन्देह, यो धेरै लामो थिएन, किनकि यो मात्र 257 पानाहरु थियो (त्रयी को तुलना मा, यो लगभग यो एक एक किताब थिएन)।
यी पाँच कथाहरु को शीर्षक हो:
नि: शुल्क चार।
Duology मृत्यु अंक
Divergent समाप्त गरेपछि, Verónica रोथ एक नयाँ कथा संग आफ्नो भाग्य कोसिस गरे, यस मामला मा एक duology, त्यो हो, दुई किताबहरु: मृत्यु को अंक, 2017 बाट; र विभाजित गन्तव्यहरु, २०१ in मा।
यो कथा धेरै प्रभाव पारेको छैन, किनकि यो सिनेमा को लागी अनुकूलित गरिएको छैन। तर ती लेखक को अन्तिम पुस्तकहरु भएको छैन।
अन्त्य र अन्य शुरुआत: भविष्य बाट कथाहरु
२०१ In मा, प्रत्येक वर्ष एउटा पुस्तक जारी गर्ने तथ्यप्रति वफादार, लेखकले प्रकाशित गरे अन्त्य र अन्य शुरुवात: भविष्यबाट कथाहरु। यो एक अद्वितीय पुस्तक हो (पहिलो एक उसले गर्छ) र त्यो यो लघुकथाहरु मिलेर बनेको थियो।
Duology हामी छानिएका थियौं
अन्तमा, २०२० मा, लेखक एक डुओलोजी पुनः सुरु भयो। २०२० मा उनले रिलीज गरे हामी चुनेका थियौं र यो आशा गरिन्छ कि अर्को किताब २०२१ मा बाहिर आउनेछ, यद्यपि यसको बारेमा अझै केहि थाहा छैन।
Hearken एक छोटो कथा हो कि वेरोनिका रोथ dystopian छोटो कथा संकलन Shards र खरानी मा सहयोग। कथानक एक वरपर घुम्छ केटी जो एक मस्तिष्क प्रत्यारोपण हुन्छ र मर्न को संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ एक सर्वनाश को बीचमा।
भेरोनिका रोथ धेरै प्रकाशित गरेको छैन, तर उनीसँग उनको आधिकारिक पृष्ठ छ जहाँ तपाइँ समाचार पाउनुहुनेछ कि उनी रिलीज गरीरहेकी छिन्। अहिले को लागी, उनको नवीनतम पुस्तक हामी छनौट गरीएको थियो, तर हामी यस नियम को दोस्रो भाग को बारे मा एक घोषणा छ कि बाहिर शासन गर्दैनौं। के तपाइँ लेखक मनपर्छ? तपाइँ उनको बारेमा के किताबहरु पढ्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » वेरोनिका रोथ: किताबहरु
म्याड्रिड पुस्तक मेला। एक यात्रा को क्रॉनिकल
पाब्लो र भर्जिनिया, मार्सेल मिथोइस द्वारा। छोटो सम्बन्ध